को–को बन्दैछन् नेकपामा प्रदेश ईन्चार्ज र अध्यक्ष ? (सूचिसहित) « Pahilo News
को–को बन्दैछन् नेकपामा प्रदेश ईन्चार्ज र अध्यक्ष ? (सूचिसहित)
प्रकाशित मिति : 13 September, 2018 2:55 pm
काठमाडौं, २८ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले केन्द्रीय सचिवालयको जारी बैठकबाट सातओटै प्रदेशका ईन्चार्ज, सहईन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वुधबारबाट सुरु भएको बैठकले आजै प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्व टुंग्याउनेगरी छलफल गरिरहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । सचिवालयमा यसअघि प्रस्तावित मापदण्ड थप परिमार्जन गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादीको साविकको निर्वाचित कमिटी र वरिष्ठतालाई आधार मानेर नेतृत्व टुंग्याउने विषयमा छलफल केन्द्रीत छ । यो मापदण्डअनुसार जुन प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई जुन–जुन पद बाँडफाँट हुन्छ, त्यसमा वरिष्ठतालाई आधार मानेर जिम्मेवारीको टुंगो ललाइने नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेशको नेतृत्व टुंगो लाग्ने बितिक्कै जिल्ला र जनसंगठनहरुको एकीकरण टुंगो लगाइने बताइएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीको सन्तुलन मिलाउनेगरी एकीकरण कार्यदलको सिफारिशलाई आधार मानेर सातै प्रदेशको नेतृत्व र संख्या अनुमोदन गर्ने नेकपाको तयारी छ । सातमध्ये ४ प्रदेशको अध्यक्ष तत्कालीन एमाले र ३ प्रदेशको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले लिनेगरी छलफल चलिरहेको छ । प्रदेशमा एउटाले सहईन्चार्ज र अध्यक्ष लिए अर्को पक्षले ईन्चार्ज र सचिव लिनेगरी बाँडफाँट मिलाईंदैछ । तर, पार्टी एकता भइसकेकाले केही प्रदेशमा को कुन पूर्व पाटीबाट भन्दा पनि ‘सिनियरिटी’लाई ख्याल गरेर ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज तोकिनसक्ने उच्चस्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा खतिवडाको सम्भावना
प्रदेश नम्बर १ को ईन्चार्जमा स्थायी समिति सदस्यहरु योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र राम कार्की दाबेदार छन् । स्रोतका अनुसार अहिले छलफल चलिरहेको मापदण्ड आधार बन्दा तत्कालीन कमिटीको नेतृत्व गरेका कारण आचार्य र कार्कीबाटै ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज तोकिनेछन् । कार्यदलले अध्यक्षमा पूर्व एमालेबाट घनेन्द्र बस्नेत र देवराज घिमिरे तथा सचिवमा पूर्व माओवादीबाट सावित्रीकुमार काफ्लेको नाम सिफारिश गरेको छ । तर, अहिले छलफल चलिरहेको मापदण्ड पारित भएको खण्डमा भने तत्कालीन एमालेको प्रदेश कमिटीमा सिनियर रहेका जगन्नाथ खतिवडा अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । तत्कालीन प्रदेश संयोजक आचार्य ईन्चार्जको दाबेदार छन् भने सहसंयोजक शेरधन राई मुख्यमन्त्री छन् । कार्यदलले नाम सिफारिश नगरे पनि तत्कालीन एमालेको भागमा अध्यक्ष पर्दा दुई पटकका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेशमा तेस्रो वरियतामा रहेका खतिवडा अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् ।
प्रदेश २ मा मण्डल, शाह र चौधरी
प्रदेश नम्बर २ को अध्यक्ष तत्कालीन माओवादी र सचिव तत्कालीन एमालेले लिनेगरी छलफल चलिरहेको छ । अहिले छलफलमा रहेको मापदण्ड पारित हुँदा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल र प्रभु शाहमध्येबाट ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज हुनेछन् । अध्यक्ष नागेन्द्र चौधरी, विश्वनाथ शाह र शत्रुधन महत्तोमध्येबाट हुनेछन् । तर प्रदेश एकीकरण कार्यदलले अध्यक्ष र सचिवको नाम भने सिफारिश गरिसकेको छैन ।
प्रदेश–३ मा शाक्य, सापकोटा र अधिकारीको चर्चा
प्रदेश ३ को अध्यक्ष तत्कालीन एमाले र सचिव माओवादीले लिनेगरी छलफल चलिरहेको छ । ईन्चार्ज र सहईन्चार्जका लागि अष्टलक्ष्मी शाक्य, अग्नी सापकोटा र नारायण दाहालको नाम छलफलमा छ । छलफल चलिरहेको मापदण्ड पारित हुँदा शाक्य र सापकोटामध्येबाट ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज बन्दा तत्कालीन एमालेका प्रदेश सहसंयोजक काशिनाथ अधिकारी अध्यक्ष बन्नसक्नेछन् । त्यस्तै, दाहाल सहईन्चार्ज या सचिव बन्नसक्नेछन् । तत्कालीन एमालेबाटै पशुपति चौंलागाईं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र शेरबहादुर तामाङ पनि अध्यक्ष र सचिवको दाबेदार छन् ।
प्रदेश ४ मा गुरुङ र अधिकारी दाबेदार
यो प्रदेशको अध्यक्ष तत्कालीन माओवादीलाई दिनेगरी शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ । अहिलेको मापदण्डअनुसार किरण गुरुङ, हितराज पाण्डे ईन्चार्ज र सहईन्चार्जको दाबेदार छन् । अध्यक्षमा वरिष्ठताका आधारमा तत्कालीन माओवादीबाट हरि अधिकारी अग्रपंक्तिमा छन् । तत्कालीन एमालेबाट खगराज अधिकारी, तुलबहादुर गुरुङ चर्चामा छन् ।
प्रदेश ५ मा भुषाल, रायमाझी, राना र पुन
यो प्रदेशको अध्यक्ष माओवादीलाई दिनेगरी छलफल चलिरहेको छ । छलफलका लागि प्रस्तावित मापदण्डका आधारमा इन्चार्ज र सहईन्चार्जका लागि घनश्याम भुषाल, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुनलगायतका नेता दाबेदार छन् । अध्यक्षका लागि दलबहादुर राना र गणेशमान पुनको नाम कार्यदलले सिफारिश गरिसकेकाले उनीहरुमध्येबाटै अध्यक्ष र सचिवको नाम टुंगिनसक्छ ।
प्रदेश ६ मा ज्ञवाली, शर्मा र बस्नेत अगाडि
प्रदेश नम्बर ६ को अध्यक्ष एमालेले लिनेगरी छलफल चलिरहेको छ । अहिले चलिरहेको मापदण्डअनुसार युवराज ज्ञवाली, जनाद्र्धन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेतमध्येबाट ईन्चार्ज र सहईन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिनसक्छ । अध्यक्षमा यामलाल कँडेल र मायानाथ अधिकारी वरिष्ठतामा अगाडि छन् । उनीहरुमध्येबाटै अध्यक्ष र सचिव तोकिन सक्नेछन् ।
प्रदेश ७ मा थापा र जोशीको नाम सर्बसम्मत्त
यो प्रदेशको अध्यक्ष तत्कालीन एमाले र सचिव तत्कालीन माओवादीले लिने सहमतिअनुसार एकीकरण कार्यदलले नाम सिफारिश गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा लक्ष्मणदत्त जोशीको नाम सिफारिश भइसकेको छ । अहिले चलिरहेको छलफलअनुसार ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज भीमबहादुर रावल र लेखराज भट्टमध्येबाट तोकिनसक्नेछन् ।